Dmitrov poteto kwesịrị ka ọ bụrụ uto Russia - magazin "Potato System"
Ndị na-emepụta ihe site na mpụga Moscow na-esonye na asọmpi mba mbụ "Ihe ụtọ Russia-2020". N'ime ụdị ndị e gosipụtara bụ Dmitrovsky Potato.
Ebumnuche nke asọmpi mba Russia maka ụdị nri nri mpaghara, nke ndị ọrụ gọọmentị na-ahụ maka ọrụ ugbo na Russia haziri, ka emepụtara iji dọrọ uche gaa na mmezu nke obere na azụmaahịa ngalaba agro-ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma nyere aka mepụta isi ọhụụ ọhụrụ maka mmepe nke mpaghara ime obodo mpaghara anyị. Ihe karịrị ụdị 500 sitere na ngalaba iri asaa na asaa nke Russia na-esonye asọmpi ahụ. N'ihi nke a, a ga-ekpebi ndị mmeri iri abụọ na asatọ na nhọpụta asatọ.
Asọmpi mba mbụ nke ngwaahịa nri "Ihe ụtọ Russia" bụ ndị na-emepụta 25 na-aga nso Moscow. Otu n'ime ha bụ Mozhaisk Milk, Chiiz nke Mpaghara Moscow, Posadskaya Kovrizhka, Lukhovitsky Cucumber, Yegoryevsky Med, Lemonade si Chernogolovka, Kolomenskaya Pastila, Kolomensky Kalach. Obodo Dmitrovsky mepere emepe na-anọchite anya asọmpi ahụ site na ụdị atọ: "Dmitrovsky potato", "Dmitrovsky gingerbread" na "Tvorog iz Gorki".
"Dmitrovsky nduku" - site na otu ụlọ ọrụ a ma ama "akwụkwọ nri Dmitrovsky". Nchịkọta ugbo, nke na-arụ ọrụ na ahịa ugbo Russia maka ihe karịrị afọ 25, taa gụnyere ụlọ ọrụ 5. Ọ bụ onye na-emepụta akwụkwọ nri, poteto na salads na Russia, na-ewe ihe karịrị ndị 300 ọrụ. Mpaghara a kụrụ akụ dị hekta 12,6. Thelọ ọrụ ahụ nwere ihe karịrị 250 nkeji nke teknụzụ ọgbara ọhụrụ. Ihe ndi oru ugbo bu nke a na - akpo usoro mmeputa kwa afo - a na - ebuputa onu ahia di iche iche n ’
Companylọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ maka ọgbọ abụọ nke ezinụlọ Filippov. Continuga n'ihu na-enyere aka ịchekwa ọdịnala nke ụlọ ọrụ na ịhụnanya maka ihe anyị na-eme.
Poteto sitere na ezinụlọ Filippov na-akọ ugbo na-arụ ọrụ kwesịrị ịbụ ọrụ nke ụdị ewu ewu na nso Moscow. Ala na-eme nri nke ide mmiri ide mmiri Yakhroma na teknụzụ kachasị ọhụrụ na-eme ka Dmitrovsky Vegetables Group of Companies too poteto eco-friendly. Enweela mmasị na uto ya na mpaghara dị iche iche nke Russia.
Ihe karịrị 100 nnukwu ụlọ ọrụ netwọkụ ejiriwo ihe ịga nke ọma na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ugbo ruo ogologo oge.
Onye isi oche nke otu ụlọ ọrụ "Dmitrovskie inine":
- Ọbụna mgbe m dị afọ iri na ụma, aghọtara m na ndụ m ga-ejikọta ụwa. Ndị mụrụ m na-arụ ọrụ n'otu ugbo, anyị na-enyere ha aka mgbe niile. Nke mbụ n'ime ugbo enyemaka, mgbe ahụ na ugbo mkpokọta - mgbe ọ dị afọ 15, ọ rụgoro ọrụ dị ka onye enyemaka nye ndị na-arụ ọrụ na mkpokọta ọka. Achọrọ m ịghọ ọkà mmụta ihe banyere ugbo. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, ọ banyere na Timiryazev Academy, mụọ ebe ahụ otu afọ. A gwara m ka m gaa n'ihu na ọmụmụ m na Germany. N'ime afọ anọ a, m malitere ịmaliteghachi, ihe mgbaru ọsọ doro anya na ndụ pụtara. Taa, ụlọ ọrụ anyị adịghị ala karịa ụlọ ọrụ ndị Europe kachasị mma na usoro teknụzụ, na usoro mmepe. Anyị nwere obi ụtọ maka ngwaahịa anyị ma na-ahụ maka ogo ha.
Antonina NEFEDOVA, onye bi na Dmitrov:
- N’ime ezin’ulo anyi, efere umu, umu nne, na umu anyi an’ahu ya n’anya. Anyị enweghị ụlọ nke anyị n’oge ọkọchị, n’ihi ya anyị na-azụ akwụkwọ nri mgbe nile. Anyị na-ahọrọ ndị ọrụ ugbo na ndị ezinụlọ. Ọtụtụ mgbe anyị na-ewere ngwaahịa nke "Dmitrovsky inine". Anyị mụtara banyere asọmpi "Mmasị nke Russia", ebe ụlọ ọrụ anyị na-esonye, ​​anyị ga-akwado ya site na ịme ntuli aka.
Elena MOROZOVA, aha:
- Mpaghara anyi bu mgbe agrarian, a na-akpo ya akwukwo nri akwukwo nri nke isi obodo. A na-akọ akwụkwọ nri dị elu ma na-atọ ụtọ n’ubi anyị. Na nduku Dmitrov dị ezigbo mma. Yana karọt, beets, kabeeji. Ana m agbalị mgbe niile ịzụta akwụkwọ nri mpaghara. Ọ na-atọ ụtọ! Achọrọ m ka Dmitrov poteto were ọnọdụ kwesịrị ya na asọmpi "Mmasị nke Russia". Onwe ya ugbua hoputara ha.
Ka anyi kwado nduku Dmitrovsky. Votu na-agba ọsọ rue Disemba 2, 2020 gụnyere
isi: Dmitrovsky Vestnik
Tags: "Ihe ụtọ nke Russia-2020""Dmitrovskie inine"Dmitrovsky ndukuMpaghara Moscow
Nzuzo nduku nzuzo. Akụkụ nke abụọ
Ka anyị kwuo maka itolite ma chekwaa inine borsch set
Mpaghara Moscow ga-eme ka mpaghara maka ịkọ akwụkwọ nri na ala mepere emepe site na 18%
Ruo 75% nke enyemaka na 50% nke mgbazinye ego dị nro site na 2022 ga-enyefe ya na kọmputa